Kedu otu onye ọka iwu Cannabis nke Chicago pụrụ isi nyere gị aka ịmalite azụmahịa?
Otu onye ọka iwu Cannabis nke Chicago nwere ike isi nyere gị aka ịmalite azụmahịa
Ọ bụrụ na ị na-achọ a Onye ọka iwu cannabis, ị abịawo ebe kwesịrị ekwesị. N'isiokwu a, anyị na-ekpughe akụkụ niile nke onye ọka iwu cannabis na-ekpuchi na azụmaahịa cannabis. Ọ dị mkpa ịmara otu esi eso iwu ndị a yana etu esi echekwa gị dịka onye nwe ụlọ ahịa.
A ọma Onye ọka iwu cannabis nwere ike inyere gị aka belata ihe ndị dị ize ndụ ma dị ogologo oge nke arụmọrụ azụmaahịa dị irè.
Nrube isi na Iwu Iwu Cannabis nke Illinois
Onye ọka iwu cannabis bụ onye ọrụ ga - enyere gị aka ịkwado iwu ndị dị na cannabis nke Illinois. Zụta marijuana ntụrụndụ ga-abụ iwu na Illinois site na Jenụwarị 1, 2020, ma nke a bụ oge maka mgbanwe dị ukwuu na ụlọ ọrụ cannabis. Ndị ọrụ kaadị ID Cannabis nke Dọkịta Ahụike nwere ike ịzụta wii wii ọgwụ ga-enwe ike ịzụta marijuana maka nzube ntụrụndụ.
Azụmaahịa edebanyere aha dị ka ihe nkesa ga-enwe nhọrọ iji nyochaa ozi ndị ahịa site na iji ụdị nyocha dị iche iche nke Cova. Na nyocha ndị a, ahụmịhe ndị ahịa ga-akacha mma maka usoro nlele ngwa ngwa na azụmahịa enweghị nkwekọrịta. Ogo ịzụta bụ ounce 2.5 nke okooko osisi cannabis. Ọ ga-ekwe omume ịzụta ego a nke ounce 2.5 n’ime ụbọchị iri na anọ ọ bụla.
Iwu ọzọ na ụkpụrụ cannabis na Illinois bụ ọnụọgụ nke THC na ngwaahịa ndị a na-enye cannabis. Agaghị anabata karịa milligrams 500 nke THC na ngwaahịa ndị a. Mkpesa ikike ịzụrụ akpaaka ga-enyere ndị na-azụ ahịa aka igbochi ndị ọrịa na ndị ahịa erutela ihe ha zụrụ. N'okwu a, ndị ọrụ gọọmentị steeti Illinois chọrọ ịbelata ị mariụbiga mmanya oke na ị consumụbiga mmanya ókè.
Ndị na-ere ahịa Cannabis na Illinois chọrọ ịnọgide na-agbaso iwu, ha ga-agbaso usoro ndị a:
Nmalite ma mechie onu ahia
Nnweta nke osisi
Akuko na-aru oru nke oma dika ndi Cova scanners tinyere na usoro nkwenye nke steeti Illinois. Njikwa ngwa ahịa na usoro sistemụ ire ere sitere na steeti wee nweta ya n'oge ọ bụla. Usoro Cova mezuru ihe ndi a choro ma a bia banyere ichota ihe ahia bu ihe ichoro idebe ahia ya n’aka umuaka. N'otu oge ahụ, a na-echebe ngwaahịa ndị ahụ n'ahịa ojii na mmebi iwu.
Nkwekọrịta na Ọrụ Azụmaahịa Cannabis
Onye ọka iwu cannabis nke Chicago nwere ike inyere gị aka ịgha ọrụ nkwekọrịta dabara na arụmọrụ azụmahịa gị. N’ime nkwekọrịta zuru oke, ị nwere ike ịkọwa iwu na ọrụ dị n’otu ọ bụla. N'ilebara anya nke ọma na nkọwapụta nke ọ bụla, onye ọka iwu cannabis nwere ike ịkọwa nkwekọrịta ndị a:
Isiokwu Ntinye ma ọ bụ Nzukọ
Nkwekorita nke ochichi nke ime
Akwụkwọ a na-ahụ maka ndị ọrụ
Nkwekorita nke ndi nke ato
Emere nkwekọrịta ndị a niile iji nye nchebe ahịa maka ikike na ụlọ ahịa gị. Akwụkwọ ọ bụla na-akọwapụta otu ị ga - esi jiri azụmahịa gị rụọ ọrụ n'oge ọnọdụ azụmahịa akọwapụtara. Comgbaso usoro iwu na ụkpụrụ Illinois bụ ihe kachasị mkpa na usoro nkwekọrịta izugbe. Onye ọka iwu cannabis ga-eme ka nkwekọrịta ndị ahụ dị mfe iji ma ghọta ya ka ewejuga gị na isi ihe kachasị mkpa nke nkwekọrịta ahụ.
E wezụga na ndị m kwuru banyere ha, ị nwekwara ike ịnweta akwụkwọ ndị na-akọwapụta azụmahịa gị n'ụzọ ka zuo ezuo. N'okwu a, ịnwere ike ịnweta nkwekọrịta ọrụ nke na-achọpụta oke na ụkpụrụ nke ndị ọrụ. Akwụkwọ ọzọ dị mkpa bụ nkwekọrịta azụmaahịa nke na-akọwa ịre ahịa ma ọ bụ ụdị ndị ọzọ na ụlọ. Akwụkwọ nke atọ na-abịa n'ụdị atụmatụ azụmahịa. Akwụkwọ a na-akọwapụta atụmatụ azụmaahịa nke cannabis nwere mmejuputa ya n'ọtụtụ ụdị dị iche iche. Iji mepụta akwụkwọ niile a, ịnwere ike ịchọ nyocha gị na onye ọka iwu cannabis Chicago.
Mmekọrịta na steeti Illinois na Okwu Ikikere Cannabis
Mmekọrịta na steeti Illinois dị mkpa n'akụkụ dị iche iche. Ndị ahịa azụmaahịa niile chọrọ inweta akwụkwọ ikikere ga-agbaso iwu ndị isi. Typesdị ngwa maka ikikere chọrọ nkọwa doro anya. May nwere ike ịnye ozi gbasara gị, nyocha akụkọ gbasara okike, atụmatụ azụmaahịa maka azụmahịa cannabis a kapịrị ọnụ, yana ego ngwa ngwa maka akwụkwọ ikike ahụ akọwapụtara.
N'ọnọdụ ahụ mgbe ịchọrọ inweta akwụkwọ ikike wii wii ọgwụ, ị nwere ike ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa $ 30,000 nke bụ ego gọọmentị na steeti Illinois. Ọ bụrụ n’inweta akwụkwọ ikike, ị ga-enwe ike ire ngwaahịa cannabis nye ndị okenye gbara afọ iri abụọ na abụọ gbagowe. Nke a ga - ekwe omume site na Jenụwarị 21, 1.
A ga-ahazi akwụkwọ anamachọihe dị ka usoro akara akara pụrụ iche si dị, ndị na-achọ akwụkwọ ga-amarakwa ma ọ bụrụ na anabatara ha na Mee 1, 2020. Ruo oge 75, a ga-enye akwụkwọ ikike ma ndị ga-achọ inweta akwụkwọ ikike ịnwe ọnọdụ nwere ụbọchị 180 iji chọta ebe kwesịrị ekwesị maka ere ere. Ndị ọrụ ngalaba ahụ ga-akwadorịrị ebe a.
Officiallọ ọrụ gọọmentị na-ahụ maka inye ikike ikikere cannabis na Illinois bụ Departmentlọ Ọrụ Njikwa Ego na Ọkachamara Illinois (IDFPR).
Inye Aka na Reallọ Azụmaahịa na oninggba Mbata
Na Illinois, ọ ga-abụ ihe iwu toro ma ree cannabis na ụfọdụ mpaghara nke steeti site na 2020. Iji mezuo ihe ndị gọọmentị chọrọ, ị ga-agakwuru onye ọka iwu cannabis Chicago ga-atụ aro mpaghara ndị dị maka azụmahịa cannabis yana otu ị ga - esi rụọ ọrụ n'ime ụkpụrụ.
Ọ bụrụ n’ị na-amalite azụmaahịa cannabis ma chọọ ịzụ ala na ụlọ, ọ dị mma ịgakwuru onye ọka iwu gị gbasara nhọrọ enwere ike ịnwe. Ibido azụmaahịa cannabis na Illinois dị mfe site na enyemaka nke onye ọka iwu cannabis na Chicago. Will ga-ahụ ihe ga - ekwe omume ibido na steeti ahụ na otu akwụkwọ ikike ikikere nwere ike isi mee ihe dị iche. Site na ezigbo atụmatụ na onye ọka iwu Chicago ọkachamara, ị ga-enwe ohere ịnweta azụmaahịa cannabis kachasị dị irè na nnukwu echiche maka uto na steeti Illinois.